Tag: onye nduzi ubi | Martech Zone
Uzo: ndu ​​ndu
Ihe omuma ihe omuma a site na Lemonly na 9clouds nke na-enye nghọta banyere otu esi agagharị na mgbasa ozi mgbasa ozi bu ihe puru iche. Ebumnuche ya bụ iji gosipụta ọfụma iji zaa ajụjụ atọ 9clouds na-enweta mgbe niile - Kedu netwọkụ m kwesịrị iji? Gini mere m ga eji Pinterest ma obu Google Plus ma obu [tinye network]? Kedu netwọkụ kachasị mma maka azụmaahịa m? Ihe omuma ihe omuma ihe nke ndi mmadu bu ihe omuma, ahia di iche iche, ndi mmadu na oge itinye aka na netwok obula.